January 26, 2021 - Khitalin Media
မိမိမွေးသက္ကရာဇ် အရ ဘယ်လမှာ ထီပေါက်ကိန်းရှိတယ် ဆိုတာ တွက်ကြည့်ကြရအောင်
January 26, 2021 by Khitalin Media
ပထမဆုံးသိထားရမှာ တစ်ခုကတော့ ထီမထိုးသူတွင် ထီပေါက်ကိန်းမရှိဆိုတာပါပဲ။ ဒုတိယသိထားရမှာကတော့ မိမိရဲ့သက်ရောက် ကံအကောင်းခွင် နဲ့ ကြုံလို့လည်း ဘယ်လမှာ မဆိုထီပေါက်နိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ယခု နည်းကတော့ ဆရာတို့နှစ်ရှည် လများ သုတေသန ပြု ရှာဖွေတွေ့ ရှိထားတဲ့ မိမိတို့ရဲ့မြန်မာလိုမွေးသက္ကရာဇ်ပေါ်မူတည် ပြီး ထီဆုမဲပေါက်တတ်တဲ့ကံထူးတတ်တဲ့ လတွေကို ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်စေတနာကောင်းဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဖြင့်ဖတ်ရန် မိမိမြန်မာမွေးသက္ကရာ ဇ်ကိုတည် (၇)ဖြင့်စားပါ။ ဥပမာ။ (၁၃၄၅)ခုဖွားဆိုပါတော့ (၇)ဖြင့်စားရင် (၁)ကြွင်းပါတယ်။ (၁၃၇၄)ခုဖွားဆိုရင်(၇)နဲ့စားတော့(၂) ကြွင်း၊ (၁၃၄၁)ဆိုလျှင် (၇)ဖြင့်စားတော့(၄)ကြွင်းပေါ့။ အဲ့ဒီလိုအကြွင်းသိပြီဆိုရင်ရပါပြီ။ (၁)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ (နယုန်)လမှာထီထိုးပါ။ (၂)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ဝါဆို)လမှာထီထိုးပါ။ (၃)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ဝါခေါင်)လမှာထိုးပါ။ (၄)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(တော်သလင်း)လမှာထီ ထိုးပါ။ (၅)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(သီတင်းကျွတ်)လမှာ ထီထိုးပါ။ (၆)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(တန်ခူး)လမှာထီထိုးပါ။ (ဝ)ကြွင်းဇာတာရှင်တွေ(ကဆုန်)လမှာထီထိုးပါ။ စေတနာမှန်လျှင်ကံကောင်းမည် ကေဇော်ဟိဏ်း (၀၉၇၆၈၂၅၈၁၇၁) မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်တွက်နည်း ကိုယ့်ရဲ့ … Read more
သင် အသက်(၂၀ မှ ၂၈ )အတွင်းဆိုရင် ဒါတွေကိုအလွတ်ရသလောက်နီးပါးဖြစ်အောင် မဖြစ်မနေ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ
သင် အသက်(၂၀မှ ၂၈ )အတွင်း ဆိုရင် ဒါကိုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ အလွတ်ရသလောက်နီးပါးဖြစ်အောင် ဖတ်ထားလိုက်ပါ အကျိုးရှိပါတယ်…. အသက် (၂၀)ကျော်အရွယ်ဟာ ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာသလို မိဘတွေကလည်း အရွယ်ရောက်လာသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်ဆံလာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအရွယ်မှာ ငွေရှာဖို့အတွက်ကိုလည်း အရမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ သင့်အနေနဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုခုရပြီးသည်ဖြစ်စေ မရသေးဘူးဖြစ်စေ၊ (၂၀)ကျော်အရွယ်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အများစုကတော့ ဒီအချိန်မှာ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုကို ရယူဖို့က အရမ်းငယ်သေးတယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ဘ၀ တလျှောက်လုံးမှာ …. အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးရယူနိုင်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို စတင်ပျိုးထောင် မွေးမြူသင့်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (၂၀)ကျော်တွေအတွက် ဒီနေ့လုပ် မနက်ဖြန်မှာ ထူးခြားချက်တွေ ခံစားရမယ့် လုပ်ဆောင်စရာ(၇)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ … Read more
ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာကံပါမပါ၊ ပြီးတော့ ဘယ်လိုချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ လက်တွဲသွားကြမယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ေ လးတွက်ပြီး သိမြင်နိင်တဲ့ ဗေဒင်တွက် နည်းလေးပါ။ ချစ်သူမွေးနေ့သက္ကရာဇ်အားလုံးပေါင်းကြည့် ၊ နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေပေါ့။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်ကြရအောင်နော်…..။ သင်က 23.4.1991 သင့်ချစ်သူက 14.7.1992 ဆိုပါစို့။ သင့်မွေးနေ့ + သင့်ချစ်သူမွေးနေ့ = အဖြေ 23 +4+ 1991 + 14 +7+ 1992 =4031 မွေးနေ့၂ခုပေါင်းထားတဲ့ အဖြေ4+0+3+ 1 = 8 အဖြေက 8 ပေါ့။ ရှင်းပြီနော်။ … Read more
လူဆယ်ယောက်ကိုဖြန့်ဝေပေးပါက လူတယောက်၏ အသက်ကို ကယ်နိုင်ကောင်းတယ် လို့ဆိုပါတယ်…
လူဆယ်ယောက်ကိုဖြန့်ဝေပေးပါက လူတယောက်၏ အသက်ကို ကယ်နိုင်ကောင်းတယ် လို့ဆိုပါတယ် ကျမ လုပ်ရမယ့် အပိုင်းကိုတော့ ကျမလုပ်ပြီးပြီ …။သင့်အပိုင်းက်ို သင်လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …။ သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။သကြားကို မထည့်ပါနဲ့။ ပူနေတဲ့သံပယိုရေနွေးဟာအေးနေတဲ့ သံပယိုရည်ထက်ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ် …။ ကဇွန်းဥ အဝါနဲ့ခရမ်းရောင်တို့မှာလည်း ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာကောင်းများ ပါဝင်ပါတယ် (၁) ညနှောင်းပိုင်း အစားအစာစားခြင်းဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ် …။ (၂) တပတ်တွင် ကြက်ဥ (၄) လုံးထက်ပို၍ မစားမိပါစေနဲ့ …။ (၃) ကြက်အဆီဘူးကို စားခြင်းဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေပါတယ် …။ (၄) အစာစားပြီး အသီးကို မစားပါနှင့်။အသီးကို … Read more
လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးသူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့…အရေးကြီးလို့ပါ
လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးသူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့…အရေးကြီးလို့ပါ သင်.. လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးပါသလား…. အရေးကြီးတယ်နော် လက်ဆစ်ချိုးတာက လက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ပြောစမှတ် တစ်ခုရှိပါတယ်။လက်ဆစ်ချိုးရာမှ ထွက်လာတဲ့အသံက သင့်အတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါသလား။ အဆစ်အမြစ်တွေဟာ လက်တွေ လှုပ်ရှားတဲ့အခါ အရိုးဆစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပွတ်တိုက်မှု လျှော့နည်းစေတဲ့အရည်တစ်မျိုး synovial fluid ရှိရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာ ဂတ်စ် (အောက်စီဂျင်၊ နှိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ လက်ဆစ်ကို ဖောက်ခနဲမြည်အောင် ချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ အရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား နေရာဟစေပါတယ်။ပိုဟလာတဲ့ နေရာလပ်က synovial fluid စုပ်ယူပေးတဲ့ ဖိအား၊ တွန်းအား ဖြစ်စေပါတယ်။ လေပူဖောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်တယ်။ နောက် အဲဒီလေပူပေါင်းတွေ ပေါက်လို့ အသံကြားနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။အရိုးအဆစ်နေရာ အပြင်ဘက် သီးခြားစီကွဲနေတဲ့အခါ ပိုကျယ်လာတဲ့အဆစ်အမြစ်နေရာမှာ ပြန် … Read more
ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးတဦးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ပရလောကဖြစ်ရပ်
ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးတဦးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ပရလောကဖြစ်ရပ် ညောင်ပင် တန်းရွာမှ ကျောင်းဆရာကိုတင်လှနှင့် မထားမေတို့မှာ ရွှေစင်ဆိုတဲ့ သမီးချောလေးရှိတယ် တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးပေါ့။ ရွှေစင်ဆိုတဲ့အတိုင်း တောသူပေမယ့် အသားဝင်းဝါ ပြီး ရွှေစင်ရုပ်လေးသမျှ လှပချောမောလေရဲ့ ရွှေစင်လေးဟာ ရုပ်ချောရုံသာမက စာပေကလည်းတော်တယ် ကြိုးလည်းကြိုးစားရှာတယ် ခုဆိုရွှေစင်လေးဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြစ်တဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသူကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ကျောင်းဆရာ ကိုတင်လှတို့ ရွာဟာ ဟိုးယခင်ကမူလတန်းထိပဲရှိတယ် နောက်ပိုင်း ကျောင်းနေကလေးများလာတာရယ် ကလေးတွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု့ကြောင့် အလယ်တန်းကျောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ် ခုဆို အ.ထ.က ခွဲ ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာ သုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ နဝမတန်းနဲ့ ဒသမတန်းကိုမူ ရွာရှိ ဆရာ /မ များက အပြင်ကျူရှင်လေး ဖွင့်ပေးထားလေတယ် မြို့မှာလို guit တွေ ဝိုင်းတွေရှိဘူးလေ နဝမတန်းကိုတော့ ဆရာမ ဒေါ်ဖြူဖြူသက်အိမ်မှာ ဖွင့်ပြီး ဒသမတန်းကိုမူ ဆရာကိုတင်လှ အိမ်မှာဖွင့်ထားတယ် … Read more
သူနဲ့ ကိုယ် ချစ်သူနှစ်ဦး မြဲမမြဲဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက် ( ၈ )ချက်
ဖူးစာပါလို့ ဆုံဆည်းလာကြရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ဘယ်သူမဆို သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် သစ္စာမဖောက်၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းချင်ကြမှာပါ။ တစ်ချို့အရာတွေက ကံတရားက ကြားဝင်ဖြတ်လို့ ပြတ်သွားတတ်တာမျိုး ချွင်းချက်ထားပြီး ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ်နဲ့တစ်သက်မခွဲပဲ မြဲမလားဆိုတာ သိချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်သူနှစ်ဦး မြဲမမြဲ ဒီအခြေခံကျတဲ့ အချက်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ၁။တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုဖြစ်တယ် ကိုယ့်ဘေးမှာ အမြဲရှိပေးတဲ့အတွက်၊ ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သူ့ကိုရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ပြောဖြစ်တယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း နေ့တိုင်း တစ်ခါနှစ်ခါမက ပြောဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီအတွဲဟာ မြဲဖို့သေချာပါပြီ။ ၂။ချစ်သူကောင်လေးဟာ ကျန်းမာတယ် အတွဲတစ်တွဲမှာ ချစ်သူကောင်လေးက ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့သူ တစ်ယောက်ဆိုရင် သင်တို့အချစ်ရေးဟာ သာယာစိုပြေမှာပါ။ ကိုယ့်ရည်းစားက … Read more
ထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ
တချိန် ငါ့သမီးလေးကို ပြောပြရမယ်ထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ တချိန် သမီးလေး သိဖို့ “ကိစ္စမရှိဘူး ငါတို့က အချိန်တန်ယောက်ျားယူမှာ ယောက်ျားက ရှာကျွေးလိမ့်မယ်”တဲ့ဘာရယ်မဟုတ် ပြုံးတော့ပြုံးမိသား….😃 ၁၆နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးကသိပ်ရိုးရှင်းတယ်လို့ တွေးရင်တွေးလို့ရသလိုအန္တရာယ်များလိုက်တာလို့တွေးရင်လည်းတွေးလို့ရနိုင်တာကိုး…. သမီးတို့အနေနဲ့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရုံနဲ့အရာရာ အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်နေကြတာတွေထမင်းစားဖို့အတွက် ယောက်ျားယူလိုက်မယ်လို့ခပ်လွယ်လွယ်တွေးလိုက်တာတွေသိပ်များနေပြီလားလို့လည်းတွေးမိပါ့… ခုခေတ် ယောက်ျားတွေ(အများစု)ကအတွေးအမြင်တွေ ပြောင်းကုန်ကြတာသမီးတို့မသိသေးတာလား?ယောက်ျားတွေကအလုပ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုယ်က သိပ်ရုန်းပေးစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးကိုပိုသဘောကျကြတယ်ဆိုတာ… ငွေရှိရင်ရှိ မရှိရင်ပညာတတ်ရာထူးရှိမှပိုသဘောကျကြတယ်ဆိုတာ…အလုပ်လုပ်တတ် စီးပွားရှာတတ်အမြင်ကျယ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုမှပိုတွဲချင်ကြတယ်ဆိုတာ.. သူတို့ကိုအစစအရာရာ သိပ်မမှီခိုတဲ့အရည်အချင်းရှိတဲ့ မိန်းကလေးကိုမှတန်ဖိုးပိုထားကြတယ်ဆိုတာ…ငါ့သမီးတို့သိအောင်ပြောပြချင်ပါဘိ… ယောက်ျားလုပ်စာလက်ဖြန့်တောင်းပြီးအိမ်မှာပဲ ထမင်းချက် ကလေးထိုင်မွေးမယ့်မိန်းကလေးမျိုးကိုသိပ်မရွေးချင်ကြတော့ဘူးဆိုတာလည်းပြောပြချင်သေးတယ်(တချို့တွေကိုဆိုလိုတာနော် အားလုံးလို့မပြောဘူး)ခုခေတ်ယောက္ခမတွေကရော….. အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ချွေးမကို ဘယ်လိုကြိုဆိုကြသလဲဘာပညာမှမတတ် ဘာအလုပ်မှမလုပ်တတ်ဘယ်နေရာမှ ဝင်မဆန့်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကိုဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုမယ့် ယောက္ခမမျိုးသိပ်ကိုရှားသွားပြီဆိုတာ ငါ့သမီးတို့သိပါလေစ… အိမ်ထောင်မပြုခင်လူ့လောကအတွက် အခက်အခဲတွေတွေ့ရင်ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်မိဘတွေက လက်နက်မျိုးစုံ တပ်ဆင်ပေးနေတာကို ငါ့သမီးတို့သိပါလေစ… ရော့ ပညာလက်နက်ငါ့ပညာနဲ့ငါလုပ်စားလို့ရတယ်လင်မျက်နှာ ယောက္ခမမျက်နှာကြည့်စရာမလိုဘူးရော့ … Read more
လွဲမှားတွေ အယူဆတွေ ပါ သမီး မွေးတိုင်းလည်း မိန်းမယုတ် မဟုတ်သလို သားမွေးတိုင်း မိန်မမြတ် မဟုတ်ပါဘူး…
မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး ၁ရက်အလိုမှာ လိုအပ်တာတွေဝယ်ရင်း အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ သတို့သမီး
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ (၂) ဦး မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှာ သတိုးသမီး ယဉ်တိုက်မှု့ဖြင့်ပွဲ ချင်းပြီးသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်… ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပထုံဌာနီခရိုင်၊ တလာဖွန်စာမြို့၊ ဝတ်မခေ ဘုန်းကြီးကျောင်းရပ်ကွက်နေ Arasdeg+Sahhet တို့ဟာချစ်သူသက်တမ်း (၇)နှစ် အကြာမှာ နှစ်ဖက်မိဘများ၏ သဘောတူချက်များဖြင့်…. မင်္ဂလာရက်မြတ် အားရွေးချယ်ပြီး ရက်သက်တစ်ပတ်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး (၁)ရက် အလိုမှ Sahhet(ဇနီးလောင်း)ဖြစ်သူမှာ မင်္ဂလာပွဲအတွက် လိုအပ်တာလေးများသွားဝယ်ရင်း အခုလို ကားတိုက်ပြီး နေရာမှာတွင်ပင် ဆုံးပါးသွားတာကြောင့် ကျန်ရစ်သူArasdeg(ခင်ပွန်းလောင်း)မှာရူးမတတ် အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့ပုံရိပ်လေးများပါ…ဘယ်လောက်တောင် ပူဆွေးနေရမလဲဆိုတာ မြင်ယောင်ကြည့်တာနဲ့တင် ယူကြုံးမရဖြစ်ရပါတယ်..အချိန်တွေ အကြာကြီးချစ်သူ သက်တမ်း အကြာကြီး လက်တွဲခဲ့ပြီးမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့် ရင်နင့်စရာ ကြုံခဲ့ရတာပါ…..။ ဘဝဆက်တိုင်း ဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုး မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်သူတွေလဲ အနားမှာချစ်ခွင့်ကြုံရတုန်းမှာ တန်ဖိုးထားလေးစားမှု့ ကိုယ်စီနဲ့ နီးစပ်နိုင်ကြပါစေ….။ … Read more